30 Tirakoobka Suuqgeyntu Waa Inaadan Waayayn | Martech Zone
30 Tirakoobka Suuqgeyntu Waa Inaadan Waayayn
Khamiis, Agoosto 22, 2013 Khamiis, Agoosto 22, 2013 Douglas Karr
Faahfaahin kasta oo dib u soo celisa suuqleyda aasaasiga ah ee dadaalkooda runtii waa awood badan. Kaliya waxaan la fadhinay macmiil maanta oo aan dhex soconay gundhigga istiraatiijiyad weyn oo ku saabsan… soosaarida waxyaabo dhowaan soo noqnoqda, oo isdaba joog ah kuna habboon oo ku saabsan barxad loogu talagalay raadinta. Iyada oo aasaaskaasi jiro, hubinta in istaraatiijiyad moobil la geeyo. Taasna waxay la socotaa, kobcinta joogitaanka bulshada si loo dhiso awood iyo saameyn - dadka dib ugu celiya suuqgeyntaada internetka. Iyo, dabcan, ku darista sawirada iyada oo loo marayo sawir-qaadis iyo fiidiyow loogu talagalay booqdayaasha u janjeera dhanka iyaga.
Optimind ayaa isku soo koobtay shaashadan oo ah 30 tirakoobka suuq-geynta dijitaalka ah si aad maskaxda ugu hayso maareyntaada suuqgeynta internetka iyo jiritaanka ecommerce.
Xogtan waxaa soo saaray Optimind, oo ah shirkad fadhigeedu yahay Phillippines. Adeegyada suuq-geynta dijitaalka ah, waad booqan kartaa www.optiminddigital.com. Wixii design web iyo SEO, booqasho www.myoptimind.com.
GoAnimate: Naqshadeynta, Abuurista iyo Qeybinta Cajalado Fiidiyoow ah
TOMS: Daraasad Xaalad Suuq Gelin Leh
Agoosto 29, 2013 saacaddu markay ahayd 9:15 PM
Hay'adda suuqgeynta dijitaalka ah iyo shirkadaha runtii wax badan ayey ka baran lahaayeen boostadan!
Sep 12, 2013 at 8: 22 AM
Miyaad siin kartaa nambarka si aad dib ugu soo dirto xogtan.
24, 2013 at 2: 17 AM
Tirakoob aad u faa'iido badan oo loogu talagalay qorshaynta tallaabada xigta oo macluumaad badan leh!